China Quick Coupler mveliso kunye nabenzi | ZAILI
Kufakelwe iswitshi elorini, kwaye isikhonkwane sokhuseleko sinokufakwa ngokucinezela iqhosha lokutshintsha elorini. Ke ngoko, ingxaki yokuphuma kwikhabhathi igcinwe. Itekhnoloji entsha yokuvula kunye nokuvala isikhonkwane sokhuseleko kufezekiswa ngokusetyenziswa kwenkqubo yokuqhuba ngombane yesixhobo sokucoca, endaweni yesixokelelwano samanzi. Ke ngoko, uxinzelelo lweoyile enexabiso eliphezulu luthathelwa indawo ngumbane, ogcina iindleko kwimveliso. Kwikhabhathi, isandi esizenzekelayo sesigodlo singasetyenziselwa ukumisela ukuba ixhunyiwe na. Kwimeko yocingo olophukileyo, ukhuseleko lokuguqulwa kwesandla kunokuqinisekiswa.
I-1, uyilo oluhlanganisiweyo olusebenzayo: kusetyenziswa amandla aphezulu e-manganese yesinyithi kunye nokuhlanganiswa koyilo loyilo olomeleleyo, oluzinzileyo nolulungele iimfuno zebandla zabagrumbi beetoni ezahlukeneyo.
2, inkqubo yokhuseleko oluzenzekelayo ngokupheleleyo: Isitshixo sombane sifakwe kwikhabhathi yokutshintsha uxinzelelo lweoyile enexabiso eliphezulu ngombane, ekulungeleyo ukuba umqhubi asebenze.
I-3, i-valve yokulawula i-hydraulic kunye ne-mechanical lock locking device ifakwe kwisilinda nganye yeoli ukuqinisekisa ukuba isixhobo sokukhawuleza sinokusebenza ngokuqhelekileyo xa isiphaluka seoli kunye nesekethe.
4, Isinxibelelanisi ngasinye esikhawulezileyo sixhotyiswe ngenkqubo yokukhusela isikhonkwane ukuqinisekisa ukuba isinxibelelanisi esikhawulezayo sinokusebenza ngesiqhelo kwimeko yokusilela kwesilinda sokudibanisa esikhawulezayo kwaye sidlale indima "yeinshurensi ephindiweyo".
5, Ukwahluka nokungafaniyo
Ukwahluka koyilo lwesinxibelelanisi kuqinisekisa ukuba isinxibelelanisi esifanayo sinokusetyenziswa kwiimpawu ezininzi zokumba kwetoni enye. Kwangelo xesha, ukudibaniseka kwesinxibelelanisi kukwaqinisekisa uluhlu olubanzi lonxibelelwano kubandakanya ukubamba, iiripers, njl njl.
Inkqubo yokhuseleko oluzenzekelayo ngokupheleleyo
Egqithileyo Imfumba yehamile
Uhlobo lweHug Hydraulic Coupler
Ngesanti kubunzulu baphantsi Multi Coupler
Ngesanti kubunzulu baphantsi Quick Coupler
Uhlobo lwePush Hydraulic Coupler
I-KB Series Breaker H-Uhlobo
Uhlobo lweTOR Breaker S-type
Uthotho Series Breaker H-uhlobo
Cwaka Uhlobo Breaker, Pulverizer Kuba Excavator, Uchebe Kuba Excavator, Hb Uthotho Breaker, Isityumzi Excavator, Control Valve Breaker,